Magacyada Xildhibaanada U Tartamaya Gudoomiyaha Iyo Ku Xigeenka Golaha Wakiilada Puntland - BAARGAAL.NET
✔ Admin on January 03, 2014
(Baargaal.net) Ilaa 4 xildhibaan ayaaa isu soo taagay xilka gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland, iyadoo doorashada gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa la qabanayo berri oo ku began 4/1/2014.
Xubnaha ilaa hadda la shaaciyey iney u tartamayaan xilka gudoomiyaha Golaha Wakiilada Puntland waxey kala yihiin:
1-Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xirsi
2-Xildhibaan Siciid Xasan Shire
3-Xildhibaan Axmed Cali Xaaji iyo
4-Xildhibaan Cabdixakiim Dhooba-daareed.
Xildhibaan Cabdixakiim Dhooba-daareed, wuxuu isna ka mid ahaa baarlamaaankii hore, wuxuuna baarlamaanka kasoo galay gobolka Sanaag.
Waxaa dhanka kale jira xildhibaano u tartami doonaa xilka guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiillada ee maamulka Puntland, waxaana xildhibaanadaas oo dhammaantood kasoo jeeda gobollada Bari iyo Gardafuu kamid ah:
1-Xildhibaan C/risaaq Siciid Aadan oo baarlamaanka kasoo galay gobolka Bari.
2-Xildhibaan C/xamiid Sheekh C/salaam oo baarlamaanka kasoo galay gobolka Bari.
3-Xildhibaan Salaad Xareed Cali oo baarlamaanka kasoo galay gobolka Gardafuul.
PUNTLAND ELECTION 2014